Home Wararka Saraakiil loo xiray weerarada Magaalada Muqdisho ay ka geestaan Al shabaab iyo...
Saraakiil loo xiray weerarada Magaalada Muqdisho ay ka geestaan Al shabaab iyo Tuhun sookala dhex galay Kooxda Qiyaano Qaran
Warar si hoose aan u heleyno ayaa sheegaya in Dowladda Soomaaliya weerarkii shalay ee ka dhacay meel ku dhow Madaxtooyada Soomaaliya u xabsiga u dhigtay Saraakiil ka tirsan Ciidanka loo yaqaano Guutada 14-ka October.
Inkastoo si dhab ah loo heyn tirada saraakiisha weerarka loo xiray ayaa hadana warar hoose aan heleyno waxay sheegayaan in ilaa iyo hadda labo sarkaal loo xiray weerarkaasi.
sida wararka ay sheegayaan Saraakiisha la xiray ayaa laga soo qabtay Xerada Generaal Gordan oo ay ku xareysan yihiin Ciidanka Gutada 14-ka October,waxaana amarka lagu xiray bixiyay taliyaha ciidamada Xoogga dalka Generaal Gorod.
Sababta saraakiisha loo xiray ayaa loo tirinayaa iney tahay sababta dableydii shalay weerarka soo qaaday u soo xidheen dareeska cusub ee loo qeybiyay Ciidamada Guutada 14-ka October iyo qaabka loo bixiyay.
Su’aalo ayaa hadda la weydiinayaa Labada Sarkaal ee weerarka loo xiray,sida wararka nagu soo gaarayaan.
Ku dhawaad lix ruux oo saddex ka mid ah ay yihiin dableydii weerarka soo qaaday ayaa ku dhintay weerarkii Qaraxyada iyo tooska isugu jiray ee shalay ka dhacay dhabarka danbe ee Hotel SYL oo ku dhow Madaxtooyada Soomaaliya.
Previous articleDowladda Soomaliya oo Fashil ka heesta tababarada Ka Fiirsi la’aanta ee Ciidamada Amaanka
Next articleFeysal Cali Waraabe oo la kulmay Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Cali Siciid Fiqi muxuu ku saabsanaa kulankooda
MW Farmajo oo Amray in Isgaarsiinta Baydhabo oo hawada laga saaro...
Wararkii ugu dambeeyay Weerarkii lagu qaaday Maqaayada The Village